on April 19, 2016 Related - Dhamma Beri Sayadaw Variety Article
ပြန်လည်တ,သသံ၊ မျှော်ကိုးတောင်းခံလိုသံတွေနဲ့ ...
"သူတို့ မတရားယူထားတာတွေကို ပြန်သိမ်းလိုက်ရင်"
"ခိုးရောင်းပစ်ထာတွေသာ တန်ရာတန်ကြေး ရခဲ့လို့ နိုင်ငံထူထောင်ရေးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်.."ဆိုတာမျိုးတွေပဲ။
"သဘာဝ သယံဇာတတွေကို အားမကိုးပါဘူး၊ ပြည်သူတွေ အတူပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ပါပဲ.." ဆိုတာလေ..။
အဲဒီအသံကို သေချာကြားရဲ့လား.. ခိုသံ,ခွက်သံ လုံးဝသတ်ကင်း အလျှဉ်းမပါတဲ့ "ကျားဟိန်းသံ" ဆိုတာကိုရော သဘောပေါက်ကြလား?
"ပြည်သူတွေ"ဆိုတဲ့အထဲမှာ ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ မခွဲမခြား အားလုံးကို တသွေးထဲ တသားထဲ ပြောသွားတာကိုရော ကြားရဲ့လား?
မြတ်ဗုဒ္ဓက- အကြီးမားဆုံး မေတ္တာထားရှိသူကို- "မာတာ ယထာ နိယံပုတ္တ=သားရင်းကိုချစ်တဲ့ မိခင်လို"လို့ ဟောတော်မူတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် (ရှင်ဘုရင်)ကောင်း-နဲ့ပတ်သက်လို့ အဋ္ဌကထာဆရာက- "အတ္တနော,ဝ ပဇံ ပဇံ=ရင်၌ပေါက်ဖွား သားအရင်းကဲ့သို့
တိုင်းသူပြည်သားကို ချစ်တတ်သော ခေါင်းဆောင်မင်း" လို့ ဆိုထားတယ်။ ဒါဟာ- ပိဋကတ်မှာ မှတ်တမ်းဝင်တဲ့ အမြင့်ဆုံး စံချိန်တွေပဲ။
ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ဆီလာပြီး စောင့်ရှောက်နေတာ၊ "ပိဋကတ်စံချိန်လွန် ပြည်သူ့မိခင်"ဆိုတာကိုရော
ခက်နေတာက သက်ရှိတွေကို အသက်သွင်းဖို့ကိစ္စ ...